यसपटक बुटवलबासीले न्याय गर्नुहुन्छ- काँग्रेसबाट मेयर उम्मेदवार खेलराज पाण्डे
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले खेलराज पाण्डेलाई मेयर पदमा उठाएको छ । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका उनी सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका हुन् । यद्यपि, जसपा यो गठबन्धनमा छैन । पाण्डे यसअघिको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग पराजित भएका थिए । एमालेले २२ वर्षदेखि जित्दै आएको बुटवलमा पाण्डेले आफ्नो चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् ? उनका योजना र प्राथमिकता के के छन् ? यी लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मण पौडेलले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीः
रुपन्देही । विषालु च्याउको सेवनबाट बुटवलमा १५ जना बिरामी परेका छन् । विषालु च्याउ खाँदा बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ नयाँगाउँका छ, वडा नं ४ लक्ष्मीनगरका सात र वडा नं १३ बेलबासका दुई
नवलपुर । बाढीले सडकको डाइभर्सन बगाउँदा बुधबार बिहानैदेखि अवरुद्ध बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को डाइभर्सन बगाएको स्थानमा नयाँ डाइभर्सन निर्माण गरेपछि उक्त सडकखण्डमा पुनः यातायात
बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध
चितवन । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल खण्डमा पुल बनाउने क्रममा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षाका कारण स्थानीय खहरेखोलामा अहिले ठूलो बाढी आएको छ । नवलपुरको
रामपुर । पहिराले अवरुद्ध बनेको सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा–बुटवल सडकखण्ड सञ्चालन भएको छ । अविरल वर्षाका कारण पाल्पा खण्डको दोभानबाट सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा माथिबाट पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेको थियो । सो क्षेत्रमा